Magazini ye "Potato System" inopa kubatana - "Potato System" Magazini
Magazini yePotato System inopa kubatana
Statistics inoratidza kuti vashandisi veInternet vemazuva ano vanowedzera kusarudza kuwana network kubva kune mafoni, uye vazhinji vanoona zviri nyore kushandisa kwete browser, asi nharembozha.
Isu tinogara tichisangana nezvishuwo zvevaverengi vedu uye tiri kutogadzirira kuvhura nharembozha yekushandisa iyo Potato System magazini.
Iyo nharembozha haigoni kuteedzera ruzivo kubva kune webhusaiti yemagazini; chikuva chitsva chakagadzirirwa kutumira zvinyorwa kubva mune yakadhindwa nyaya, pamwe nekudhindisa yakasarudzika nyanzvi yezvinyorwa. Zvese zvinhu zvinowanikwa chete kune vanonyorera.
Kutanga kwepamutemo kweprojekiti kwakarongerwa kutanga kwaNyamavhuvhu, uye ikozvino isu tine yakasarudzika kupihwa kumakambani anoshanda mumusika wekurima uye vanofarira vateereri vembatatisi: tinokoka mukuru wekufambisa naye kubatana, ndiani achakwanisa kushambadza zvigadzirwa zvavo mukushandisa pane pekutanga hwaro.
Mazwi ekubatana anogona kutaurwa nemusoro wechinyorwa, Viktor Kovalev:
Tags: magazini "Potato System"mobile app
Mhando dzakakurumbira dzembatatari muKrasnoyarsk Territory dzakazivikanwa